Inkcazo yokuHamba okuluhlaza - Impembelelo Esezantsi
Inkcazo yokuHamba okuluhlaza
Izizathu zokonga umbane
Inkcazo yokuba luhlaza iyahluka ukusuka komnye umntu uye kwelandelayo kuxhomekeke kwinqanaba kunye nobungakanani abanqwenela ukuqhubeka nobomi obuhlaza. Abanye abantu bakholelwa ekubeni kufuneka bangene ngendlela eluhlaza ngokupheleleyo ngexesha elinye. Ngelixa uluvo lulungile, le ndlela inokuba yingxaki. Kuba akunakwenzeka ukuguqula indlela yokuphila eluhlaza ngokupheleleyo ngexesha elinye, kungcono ngakumbi ukwenza utshintsho oluncinci ngexesha.
Ukuya eluhlaza kuthetha ukuba ukhetha indlela yokuphila ezinzileyo kunye nehlaziyekayo. Indlela yokuphila eluhlaza ijolise ekunciphiseni, ukusebenzisa kwakhona kunye nokurisayikilisha ukuba kunokwenzeka. Ukuya kuluhlaza yinkqubo ethe chu yokutshintsha indlela obuphila ngayo ngokusebenzisa iimveliso ezithathwa ngokuba ziluhlaza kunye nokuqinisekisa ukuba unciphisa ukuprintwa kunye nosapho lwakho kwikhefu kwindalo esingqongileyo.
indlela yokwelula umnqwazi olinganisiweyo
Izenzo ezingama-50 ezithile zokuPhila okuluhlaza
Imizekelo yoPhuhliso oluZinzileyo
Yiya kwimifanekiso eluhlaza
Zithini iikhrayitheriya zohlaza?
Zininzi kwaye zihlala zihluka ngeendlela zokuchwetheza into njengokuluhlaza, kuxhomekeke kwimveliso.
Iimveliso eziluhlaza onokuzisebenzisa zibandakanya:
Izambatho kunye neefashoni zasekhaya: Imicu ekhuliswe ngokwasemzimbeni esetyenziselwa ukwenza isinxibo kunye neefashoni zasekhaya ezahlukeneyo zenziwa ngaphandle kwemichiza erhabaxa. Ukongeza, ezo mveliso kufuneka zenziwe ngokusebenzisa iindlela ezinobuchule kuphela.
Ukuthengisa okungcono: Ukuba unqwenela ukuthatha le nkxaso yabathengi eluhlaza ngakumbi, ufuna ukujonga iimveliso zoRhwebo oluLungileyo. Ilebheli yoRhwebo elungileyo yenzelwe njengendlela yokuqinisekisa ukuba amagcisa kumazwe asaphuhlayo enza imveliso nawo anokufumana umvuzo olungileyo. Isatifikethi soRhwebo oluLungileyo sikwakhuthaza uzinzo kunye nokukwazi ukukhuphisana ngexabiso elifanelekileyo lemarike. Esi siqinisekiso sinceda ekuphakamiseni umgangatho wokuphila kwabo bakwimimandla yoxinzelelo lwezoqoqosho kwihlabathi, ngelixa lixhasa uzinzo.
Ukutya okungokwemvelo: Ukutya okungokwemvelo zilinywa kusetyenziswa izichumisi zendalo, ezingezo-GMO (ii-Organic Modified Organisms) imbewu kunye nezinye iindlela zokulima. Xa uthengela ukutya okune-organic, jonga kwilebheli esemthethweni yeOrganic. Iimveliso ezithwala le lebhile kufuneka zihambelane nemimiselo engqongqo yokukhula kunye nokuhlolwa. Ukuba uthatha isigqibo sokukhulisa ukutya kwakho okune-organic, indawo yokuqala yimbewu yakho. Ukuthenga imbewu eqinisekisiweyo engeyiyo i-GMO okanye i-hybrid.
Amandla ahlaziyiweyo kunye nozinzileyo: Iifom zamandla ezivuselelekayo kwaye zizinzile, ezinje ngelanga, umoya, ihydro, i-geo-thermal kunye ne-biomass zonke zithathwa njengamandla aluhlaza.
Ukuqonda inkqubo yokuGreen
Akonelanga ukuba utshintshe iimveliso. Ngelixa eli linyathelo lokuqala elihle, ukuya eluhlaza kufuna indlela entsha yokucinga. Kuya kufuneka uguqule indlela ojonga ngayo umhlaba, ngakumbi njengomthengi kwaye ophambili njenge-wannabe Earth steward. Utshintsho olusuka kumthengi ophakathi luye kwinto eluhlaza luhlobo lwenkqubo eguqukayo njengoko ufunda ngakumbi nangakumbi malunga nale ndlela yokuphila.
Umntu ngamnye kufuneka athathe isigqibo malunga nenqanaba lokuphila eliluhlaza alinqwenelayo kwaye emva koko enze ukuzibophelela kwithayimthebhile eyiyo yokufikelela kuloo njongo. Ukuba unqwenela ukwenza uguquko olupheleleyo kwindlela yokuphila eluhlaza kwelona nqanaba liphezulu lokuhlala kwikhaya eliluhlaza, uvelise amandla akho kwaye ungabikho-kwigridi, kuya kufuneka uthathe inyathelo elinye ngexesha.
Isizathu soTshintsho oluNcinci
Kukho izizathu ezininzi zokwenza utshintsho lwakho kwindlela yokuphila eluhlaza inkqubo ethe chu. Okokuqala, kuninzi onokukufunda kwaye nangakumbi ukungafundi. Isigama sokuphila oluhlaza sihluke kakhulu. Xa usenza ukuthenga okulula, ufuna ukujonga iseti yeekhrayitheriya eyahlukileyo kunale uyenzayo ngoku.
Umzekelo, xa ufuna ukuthenga imveliso yendalo ufuna iilebheli ezisemthethweni eziphilayo. Nangona kunjalo, kukho iimeko ezithile apho unokuthenga ukutya okwenziwe endaweni okungaqinisekiswanga. Ungakuvumeli ukungabikho kwesiqinisekiso kukoyikise ekuthengeni ukuba uyazi ngokuqinisekileyo ukuba umlimi ngokunyanisekileyo wenza imigaqo-nkqubo yokukhula kwezinto eziphilayo. Ukuqinisekiswa kuyabiza kwaye ayisiyiyo into yokuba umlimi wendawo, okhula imifuno yendalo emva kwendlu yakhe, uza kuyifuna. Uya kufumanisa uninzi lwabalimi abangaqinisekiswanga kwiimarike zalapha ekhaya. Kungenxa yokuba abantu abaninzi abakhulisa imifuno ephilayo kwiiyadi zabo ngasemva bathatha imveliso yabo egqithisileyo kwintengiso yasekhaya.
Thenga iNdawo xa kunokwenzeka
Ukuthenga ekuhlaleni yenye yemigaqo yokuqala eluhlaza oza kuyifunda hayi imveliso yemveliso. Nanini na xa uthenga, zama ukuthenga ekuhlaleni. Ukuba u-odola into kwaye kufuneka ithunyelwe kuwe, ke uyayonyusa ibango lamafutha eefossil ukuze ufumane imveliso ihanjiswe ekhayeni lakho.
Ngamanye amaxesha awukwazi ukufumana into oyifunayo kwindawo yakho. Kwiimeko ezinjalo, ukuba kuya kufuneka uye kwesinye isixeko okanye iidolophu ezininzi ezikufutshane ngaphambi kokuba ufumane imveliso, le asiyondlela esengqiqweni okanye esebenzayo yokuthenga. Uphela uchitha ngaphezulu kwiifosili zokuya esixekweni kwaye uphele uphulukana nexesha elininzi. Ngelixa injongo kufuneka ihlale ikukuxhasa amashishini endawo, amathuba okuba kufuneka uziswe izinto. Owona mceli mngeni mkhulu kukunciphisa iindleko zokuthumela kunye nokuthenga ngobulumko. Suziva unetyala ngezinto ongenakuzithenga ekuhlaleni. Ukuba uqinisekisa ukuba ukuthengwa kwakho kuluhlaza, usaxhasa urhwebo oluhlaza.
Enye yezinto zokuqala abantu abaninzi bakholelwa ukuba kufuneka bazenze xa besakha ikhaya eliluhlaza kukwakha i-LEED (ubuNkokheli kwiMandla nakuYilo lweNdalo) ekhaya. Ngelixa le yimpumelelo enkulu, ayisoloko isebenza. Kukho iintlobo ezimbalwa zamakhaya onokuzakha eziluhlaza, kodwa azizukuwela phantsi kwesiqinisekiso seLEED. Ukuba awakhi, kodwa ulungisa ngokutsha okanye uhlaziya, emva koko unokusebenzisa iindlela zokwakha eziluhlaza ukuze ungene nzulu ekuzinikeleni kwakho eluhlaza.
Zibophelele ekuHambeni oluhlaza
Kukho amanyathelo amaninzi onokuwathatha ukuze uqonde inkcazo yokuluhlaza okwenziwe ngokutsha kwekhaya ukuya kuthenga imoto yombane. Konke kuqala ngokuthatha inyathelo lokuqala.
Online Games Imifanekiso Yepati Ukulayita Malunga Ikrisimesi Amanqaku Ewayini
yintoni yokondla iintlanzi zegolide ngaphandle kokutya kwentlanzi
ngubani umbulali wokuqala wabaselula
iinyaniso ezilungileyo zokubuza umfana
eyona iliso yokwenza iliso eliluhlaza